Zinedine Zidane Oo Go'aan Ka Gaaraya Mustaqbalka Real Madrid
HomeSuuqa kala iibsigaZinedine Zidane oo go’aan ka gaaraya mustaqbalka Real Madrid
May 15, 2021 Suuqa kala iibsiga, Horyaalka Spain, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Mustaqbalka Zinedine Zidane ee Real Madrid ayaa ahaa hadal haynta ugu badan ee waqtiyadan dambe waxayna haatan umuuqataa in macalinka reer France uu ugu dambeyn qaatay go’aankiisa.
Sida laga soo xigtay TeleMadrid , Zidane ayaa kala tagi doona Los Blancos dhamaadka xilli ciyaareedkan. 48 jirkaan ayaa ka tagi doona shaqada Real Madrid xagaaga, iyadoo aan loo eegin inuu awood u leeyahay inuu difaaco horyaalka La Liga iyo haddii kale.
Zinedine Zidane ayaa markii ugu horeysay la wareegay shaqada Santiago Bernabeu bishii Janaayo 2016, ka dib markii Los Blancos ay ceyrisay Rafael Benitez. Labadii xilli iyo bar ee xigay, wuxuu ku hogaamiyay Real Madrid hanashada Horyaalka La Liga, laba koob oo UEFA Super Cup ah, laba koob oo FIFA Club World Cup ah, iyo seddex koob oo UEFA Champions League ah.
Zidane ayaa ka tagay kooxda isagoo madaxiisu sarreeyo bishii May 2018. Si kastaba ha noqotee, Los Blancos ayaa ku dhibtootay la qabsiga bixitaankiisa Zizou wuxuu ku laabtay Bernabeu bishii Maarso 2019 si uu u bilaabo maamulkiisii ​​labaad ee kooxda.
Imaatinkiisii ​​labaad, si kastaba ha noqotee, si dhib leh uma noqonin sidii midkiisii ​​ugu horreeyay. Zidane ayaa ka caawiyay Real Madrid hanashada koobka La Liga xilli ciyaareedkii hore, laakiin kooxdiisa ayaa ku guuldareysatay inay saameyn ku yeelato Yurub.
Waxaa sidoo kale jira warar sheegaya inuu dhacay madaxweynaha kooxda Florentino Perez. Si kastaba ha noqotee, ciyaaryahanka reer France ayaa xiiseynayay mustaqbalkiisa isbuucyadii la soo dhaafay, inkastoo ay soo baxayaan warar sheegaya inuu qorsheynayay bixitaankiisa muddo bilooyin ah.
Shirkiisii ​​jaraa’id ee ugu dambeeyay, tababaraha Real Madrid wuxuu ka hadlay hadalo kooban oo qarsoodi ah oo ku saabsan qorshayaashiisa, isagoo sidoo kale sheegay inuu si fudud diirada u saarayo horyaalka.